Koox hubeysan oo magaaladda Muqdisho ku dilay Askeri ka tirsan Booliska – Madal Furan
Hoy > Warka > Koox hubeysan oo magaaladda Muqdisho ku dilay Askeri ka tirsan Booliska
Koox hubeysan oo magaaladda Muqdisho ku dilay Askeri ka tirsan Booliska
Muqdisho (Madal Furan) – Kooxo hubeysan ayaa saakaAskari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka waxay ku dileen magaaladda Muqdisho gaar ahaan suuqa beerta, afafaaka hore ee xerada ciidanka Afasiyooni ee degmada Xamar Jabjab.
Askeriyga la dilay oo ayaa wuxuu ka tirsanaa ciidamada Booliska waxaana lagu magacaabi jirayAllaha u naxariistee Mahad Gudhuu, wuxuuna ka tirsanaa ciidanka ilaalada barta kontorool ee ku taalla suuqa beerta.
Dilka Askerigan ayaa la soo sheegayaa inay fuliyeen Laban in oo dhalinyaro ah oo ku hubeysan bastoolado, waxaana dad goobjoogayaal ah sheegeen inay dhowr xabadood ay madaxa kaga dhifteen askeriga kadibna ay baxsadeen iyagoo hory u sii qaatay qorigii uu askerigu watay..
Ilo wareedyo ayaa waxa ay inoo sheegeen marxuumka la dilay oo ahaa nin da’ah markii uu dilkiisa dhacayay inay halkaasi ka agdhawaayeen ciidamo kale oo aan ku bixin ragga dilka geystay.
Dilka markii uu dhacay oo raggii hubaysnaa ay meesha ka baxsadeen ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo durba goobta baaritaan ka sameeyay.
Ma jirin ciidamada yimid goobta cid ay meesha ka qabteen, maadaama raggii dilka geystay ay meesha markiiba isaga tageen, waxaana ciidamada ay meesha ka soo qaaden meydka askarigii la dilay.
Ururka Al Shabaab iyo kooxda Daacish ayaa dilal qorsheysan ka geysta magaalada Muqdisho, waxa ayna eegtaan ciidamada dowladda iyo dadka kale ee dowladda la shaqeeya.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa si xowli ah ugu soo badanaya dilalka ay ka gaysanayan ragga bistooladaha la cararaya, iyada oo habeen iyo maalin ay shaqeynayaan hay’adaha ammaanka.
Dr. Gaas iyo Eng. Camey oo isku khilaafay Guddiga xalinta khilaafaadka xildhibaanada Baarlamaanka Puntland
Israa’iil oo qiil u raadisay 55 qof oo ay Falastiin ka dishay